Safrana - Ny zava-manan'aina faran'izay lafarina eran-tany ary miaraka amin'izay ihany koa ny fanafody
Fanasitranana safrona - angano sy angano
Ny safrony dia fantatra ihany koa ho mpanjaka mpanangom-bokatra. Tsy misy antony, satria ity no zava-manitra tena lafo indrindra eran'izao tontolo izao. Izy io dia azo avy amin'ny voninkazo avy amin'ny zavamaniry "Crocus Sativus". Ny kofehy fitomboka telo ihany no azo alaina isaky ny voninkazo.
Safrana - Ny siramamy sy fanafody manerantany
Ho an'ny fijinjana karazana safrona iray, ilaina ny zavamaniry 200.000.
Ny habetsaky lafo indrindra eran'izao tontolo izao - azo avy amin'ny Crocus sativus
Satria tsy afaka ny haka ny kofehy amin'ny milina, dia hambara eto ny asa tanana mahavariana. Izany koa no mahatonga ny zava-tsarobidin'ity zavamaniry ity.
Safira dia efa nambara tamin'ny angano grika. Ny tantara dia milaza fa natory teo am-pandriana io harena io i Zeosy. Angano maro no mihodina manodidina ny mpanjakan 'ny zava-manitra, saingy fantatra sy ankasitrahana ny fanasitranany.
Toeram-piompiana sy fizarana safrona
Inoana fa niparitaka manerana izao tontolo izao ny zavamaniry avy any Kreta fahiny. Tsy fantatra ny fanambarana mivaingana momba ny firenena niaviana. Koa satria ny zavamaniry marefo dia mankafy ny toe-pahaizan'ny klimatisma, ny safrona dia tsy afaka maniry na aiza na aiza manerana izao tontolo izao.
Amin'izao fotoana izao ireo faritra manan-danja indrindra any Iran. India sy Gresy no sehatry ny famokarana safrony. Vetivety dia mihalalina ny mari-pana ao Maraoka sy Espana. Ny habetsahana eto dia kely vitsy miaraka amin'ny 1,3 taonina isan-taona. Any Eoropa Afovoany ihany koa dia afaka mirehareha ny faritra misy azy. Ohatra, ny safaro Wachauer sy ny safrony pannonian dia mamboly any Aotrisy. Ny mahaliana indrindra dia ny vohikala Mund ao Soisa. Eto, ity zava-manitra sarobidy ity dia mitombo eo amin'ny faritra manodidina ny 2.500 metatra toradroa. Rehefa mahita ny fijinjana, dia miara-mivory ny tanàna iray manontolo.
Ny zavamaniry dia nomena ny hery fanasitranana, tany Gresy fahiny izy io ho fitaovana azo antoka ny herinaratra. Tamin'ny taona taloha dia voalaza fa ny safrona ihany no natokana ho an'ireo andriamanitra sy ireo mpanjaka. Nanao akanjo nasiana safrona izy ireo.
Ny hevi-bahoaka dia heverina ho hemostatika, mamelon-tena sy manatanjaka ny voaly. Ny loko miloko dia ampiasaina amin'ny fanafody Shinoa nentim-paharazana (TCM), fa koa amin'ny maha-naturopathie ao an-toerana. Ankoatra izany, ny safrony dia heverina ho fahagagana mamirapiratra. Azo atao ao amin'ny kofehy mena ny fantsom-panafody miaraka amin'ny fampiasana zava-manitra sy fofona hafa.
Ny zavamaniry dia sarobidy ho an'ny tsiro bitika bitika kely. Ampahany kely fotsiny no omena azy, manome sakafo manokana sy loko mena.
Turmeric | Sakafo mahandro
Hamorona zaridaina zaridaina | Sakafo avy amin'ny garda
Ny sakafo rehefa misintona vidy mihinana
Fitaovana ovy - akanjo maotina